IFA 2019: Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara mmemme | Gam akporosis
N'ime afọ ahụ, e nwere isi ihe abụọ dị mkpa nke ewepụtara ọtụtụ ngwaahịa, ọkachasị ama. Na February anyị ga-ezute MWC, nke a na-eme na Barcelona. Na mgbakwunye, anyị nwere IFA, nke na-eme na Berlin na ngwụcha Ọgọstụ ma ọ bụ mbido Septemba. Afọ a, IFA 2019 na-eru nso ma anyị amatala nkọwa ole na ole.
Anyị na-agwa gị ihe niile anyị kwesịrị ịma gbasara IFA 2019. Karịsịa ugbu a na ọtụtụ ụdị na-akwado ọnụnọ ha na ihe omume na Berlin, nke mere na anyị amalarị ụfọdụ akụkọ anyị nwere ike ịtụ anya na nke gị, ma si otu a na-a atta ntị na ihe ihe omume a hapụrụ anyị.
1 Kedu mgbe a na-eme IFA 2019?
2 Otu esi aga
3 Gịnị ka anyị ga-atụ anya
Kedu mgbe a na-eme IFA 2019?
A na-eme ihe omume a n'etiti njedebe nke Ọgọstụ na mbido Septemba. Agbanyeghi na mbipụta nke afọ a dịtụ karịa ka o kwesịrị. Kemgbe IFA 2019 ga-ebido na Septemba 6, na ọ gbatịkwara ruo n’abalị iri na otu nke otu ọnwa ahụ. Ọ bụ ezie na ụbọchị tupu mmalite nke ihe omume a na-enwekarị ihe omume, dị ka ọ na MWC 11. Yabụ anyị nwere ike ịtụ anya akụkọ ụbọchị ole na ole tupu mmemme ahụ amalite.
N'ụbọchị ndị ahụ a na-eme ememme a, ọ ga-emeghe n'etiti 10: 00 na 18: 00. Ya mere enwere ike ileta ya n'oge ndị a. Agbanyeghi na aghaghi icheta na obu nnukwu ulo, ya na kariri 160.000 m². Ya mere, ị ga-eje ije ọtụtụ na ọ dị mma ịmata ọnọdụ nke ụdị ma ọ bụ ngosi ndị ahụ ịchọrọ ịga.
Otu esi aga
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịga IFA 2019, n'ihi na ị nọ n'obodo ahụ n'ụbọchị ndị ahụ ma ọ bụ n'ihi na ịchọrọ ịme ihe omume a maka oge mbụ, enwere ike inweta ha ya ukara website. Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị na-ahụ ụdị tiketi dị iche iche na nke a, yabụ ị ga-ahọrọ nke kachasị adaba maka gị. Otu n'ime nkọwa nke mmasị bụ na ọnụahịa na-adịkarị ọnụ ọnụ.
Yabụ onye ọ bụla nwere mmasị ga nwee ike ịga leta IFA 2019 na-enweghị ọtụtụ nsogbu. A na-azụta tiketi ozugbo na ebe nrụọrụ weebụ ya, yabụ na ị ga-agbaso usoro ndị egosiri na ya. Ọ dịghị mgbagwoju anya ma ọlị.
Gịnị ka anyị ga-atụ anya
IFA 2019 ga-abụ ihe omume ahọpụtara n'ọtụtụ ụdị na gam akporo iji hapụ anyị akụkọ. N'ime izu ndị a tupu ihe omume ahụ, ọtụtụ n'ime ha na-ekwenyekarị na ha nọ ebe ahụ. N'ezie, n'izu gara aga ha abụrụlarị ụlọ ọrụ abụọ nwere nkwenye ha ga-eweta ekwentị ọhụrụ na ihe omume ahụ n'isi obodo German.
LG bụ onye mbụ gosipụtara ọnụnọ ya na IFA 2019. Onye nrụpụta Korea ga-ewetara ekwentị abụọ na ihuenyo, nke asịrị bụ V60 ThinQ. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịhụ ekwentị ọzọ maka akụkụ ya, LG G8X ThinQ, nke ihe ọ bụla amaghị, mana onye nhazi ya ọ leaked this weekend. Ya mere, ọ dịkarịa ala ekwentị abụọ maka akụkụ gị na ihe ngosi a.
Nokia bụ akara ọzọ nke gosipụtara na ọ ga-anọ na IFA 2019. Dị ahụ ga-aga ihe omume a maka oge mbụ na isi obodo German, n'ihi ya, ọ bụ ihe ngosi ezubere iji mee ka ndị ọrụ nwee mmasị. N'oge a amabeghị kpọmkwem igwe ha ga-ahapụ anyị, n'agbanyeghị na echepụtara ya Ọ ga-abụ Nokia 7.2, Nokia 6.2 na Nokia 5.2. Anyị ekwesịghị ichefu na ha na-arụ ọrụ na ụdị ọhụụ kachasị elu ha, yabụ ọ nwere ike ịbụ ekwentị ọzọ ha na-eweta na mmemme ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ha ga-abụ otu n'ime isi ihe dị na ya.
O yikarịrị ka izu ndị a a ga-agbakwunye ọtụtụ ụdị, na-akwado nkwenye ha na Berlin. Anyị ga-ege ntị na ihe anyị nwere ike ịtụ anya na IFA 2019 a, nke na-ekwe nkwa ịhapụ anyị ọtụtụ akụkọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IFA 2019: Ihe anyi kwesiri imata
Rịọ foto site n'aka onye ọ bụla nọ n'ụwa iji were Looxie